Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Cofa apha ukuba le ngxelo yakho! » IDrone entsha inokuphakamisa i-200 kg kunye neempukane ezingama-40 km
Ngaba unazo iinkcukacha ezongezelelekileyo kolu shicilelo?
Ngaba unayo nayiphi na ingcaciso eyongezelelweyo, iifoto, iividiyo okanye amakhonkco aluncedo?
Cofa apha ukwamkela olu shicilelo kwaye ufumane ukubonakala ngakumbi.
Ngolwazi oluthe kratya malunga nendlela yokuthumela ukukhutshwa kunye nathi, yiya ku www.travelnewsgroup.com/visibility
Idrone yombane onzima ophakamisa umbane weVolocopter IVoloDrone iqhube inqwelomoya yayo yokuqala esidlangalaleni namhlanje kwi-ITS World Congress ka-2021. Kunye nenkokheli yamalungiselelo ezamazwe aphesheya u-DB Schenker, uVolocopter, uvulindlela wokuhamba komoya wedolophu (i-UAM), ubonise ukudityaniswa kwe-VoloDrone engenamthungo kulungelelwaniso lonikezelo lwezinto kunye nomthwalo wokuphela umboniso wezothutho. Amaqabane abonise inkqubela phambili yabo ebalulekileyo kunye ukusukela oko i-DB Schenker yaba ngumtyali mali weVolocopter ekuqaleni kuka-2020.
IiVoloDrones zixhotyiselwe ukuba zithwale umthwalo ukuya kuthi ga kwi-200 kg. Oku kubenza balungele uluhlu olubanzi lwemisebenzi enzima kwaye ngokunyanisekileyo bapholile.
IiVoloDrones zihamba umgama. Ngoluhlu olude ukuya kwiikhilomitha ezingama-40, banokusebenza ngaphakathi kwerediyo enkulu ukusuka kwindawo yabo yokuhamba. Ukudityaniswa nokuhlawulwa okukhulu oku kuvula amathuba amahle.
Njengeeteksi zethu zomoya zeVoloCity, iVoloDrone isebenza nge-100% yombane oxhonywe ngombane kwaye iimpukane azinamdiza. Ukucoceka nokuzola-yeyona ndlela yokuhamba ifanelekileyo.